Sanatar Goonjeex oo Dowlad Goboleedyada ku dhaliilay in aysan ku xirneyn Aqalka Sare – Kalfadhi
Sanatar Goonjeex oo Dowlad Goboleedyada ku dhaliilay in aysan ku xirneyn Aqalka Sare
March 25, 2019 Kalfadhi
Sanatar Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex ayaa wareysi uu siiyey Kalfadhi waxa uu ku sheegay in aysan jirin xiriir wada shaqayneyd oo ka dhaxaya Dowlad Gobaleedyada ka jira dalka iyo Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo Dowlad Goboleedyada wakiilka uga ah Dowladda Dhexe. “Majirto ilaa iyo hadda arrin ay soo gudbisteen Maamul Gobaleedyada dalka, oo la soo dhex dhigay Aqalka Sare” ayuu yiri Sanatar Goonjeex.
Sanatar Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex ayaa sheegay in shaqadda Aqalka Sare ay tahay inta badan u dhaxaynta Dowlad Gobaleedyada ka jira dalka iyo Dowladda Dhexe, sidaasdarteedna loo baahnaa in wax kasta oo ay tabanayaan Maamul Gobaleedyadu ay la wadaagaan Aqalka Sare. “Madaxda Maamul Gobaleedyada hadda waxa ay toos ula xiriiraan Dowladda Dhexe, waana qalad” ayuu yiri Sanatar Goonjeex.
Sanatarku waxa uu ugu baaqay Madaxdda Dowlad Gobaleedyada ka jira Soomaaliya in ay ilaaliyaan nidaamka federaalka ah ee hadda ka jira dalka, “si” buu yiri “loo wada shaqeeyo”. Waxa uu ka digay in meesha laga saaro doorkii uu Aqalka Sare ku lahaa hogaaminta Soomaaliya. “Waxaa ii muuqata in layska indha tirayo doorkii Aqalka Sare ee Fedaraalka Soomaaliya” ayuu Sanatar Goonjeex ku yiri wareysiga uu siiyey Kalfadhi.
Sanatar Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex waxa uu sheegay in dalku hadda yahay wadan nidaamkiisu uusan fariisan, marka laga eego dhanka dastuurka qabyada ah iyo shuruucda dalka oo aan dhamays tirnayn, “laakiin waxaa loo baahan yahay” buu yiri “in la dhowro inta yar ee nidaamka ah ee ka jira dalka”.
Xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo la shaaciyay iyo haweenka oo door ka helay
Guddiga Dastuurka Baarlamaanka oo sheegay in u codeynta shacabka fekradahoodii dastuurka ay tixgelinayaan